Apple dia nanjavona tamin'ny lisitry ny mpanatrika ny NAB Show 2021 | Avy amin'ny mac aho
Apple dia nanjavona tamin'ny lisitry ny mpanatrika amin'ny NAB Show 2021
Ny fiverenan'i Apple amin'ny NAB Show taorian'ny tsy nahitana folo taona dia tsy isalasalana, taorian'ny nanalan'ny tranonkalan'ny fampisehoana ny Apple. toy ny iray amin'ireo orinasa mandray anjara amin'ny 2021, taorian'ny nampidiriny azy tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo.
Ny NAB Show dia ny foara izay mikarakara isan-taona ny Fikambanam-pirenena mpampita vaovao any Las Vegas, ary natokana ho an'ny mpijery matihanina, mpianatra amin'ny fampielezam-peo, fialamboly, vaovao ary fizarana atiny.
Ny alahady lasa teo, ny tranokala NAB Show tamin'ny fanontana 2021 izay hatao amin'ny volana oktobra, dia nampiditra an'i Apple ho isan'ny vondrona orinasa izay hanatrika ny andiany manaraka amin'ity hetsika ity.
Na izany aza, ao anaty fanavaozana ny tranokala, ny National Association of Broadcasters nesoriny mangingina ny firesahana an'i Apple, mitazona ireo orinasa mitovy amin'ny lisitra iray ihany hatramin'ny Alahady lasa teo.
Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika ny antony nanesorana an'i Apple tamin'ity lisitra ity, saingy ny mety mbola hanatrehany ny fanontana amin'ity taona ity dia tsy nolavina tanteraka. Mety hipoitra amin'ny fampisehoana varotra i Apple tsy voatery ho mpanampy lehibe.
Raha manatrika ny fampisehoana varotra mifantoka amin'ny fandaharana i Apple, io no fisehoana ofisialy voalohany an'i Apple afaka folo taona. Ny fitsidihany farany dia tamin'ny aprily 2011, fony izy nampiasa ny FCP User Group SuperMeet handefa ny 64-bit Final Cut Pro X.
Raha heverina fa lasa sehatra video streaming i Apple, dia toa lojika ny fiverenan'ny orinasa amin'ilay hetsika. Ny NAB Show 2021 dia hotanterahina avy 9-13 Oktobra tany Las Vegas.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia nanjavona tamin'ny lisitry ny mpanatrika amin'ny NAB Show 2021
Navoaka ny watchOS 7.6.1 hanamboarana lesoka fiarovana
Ny bateria sasany dia tsy mandeha amin'ny AirTags ary manoro hevitra i Apple